Akụkọ Jonathan Spier na Martech Zone |
Edemede site na Jonathan Spier
Lee ọnọdụ nke onye nrụpụta mmepe ahịa (SDR). Ndị na-eto eto na ọrụ ha na-adịkarị mkpụmkpụ na ahụmahụ, SDR na-agbalịsi ike ịga n'ihu na ahịa org. Otu ọrụ ha bụ: weta atụmanya iji mejupụta pipeline. Ya mere, ha na-achụ nta na ịchụ nta, ma ha enweghị ike ịhụ ebe kacha mma ịchụ nta. Ha na-emepụta ndepụta nke atụmanya ha chere na ọ dị mma ma ziga ha n'ime oghere ahịa. Mana ọtụtụ n'ime atụmanya ha adabaghị